သတင်း - ဖန်ပုလင်းထုပ်ပိုးမှုနယ်ပယ်တွင်အားသာချက်များ
၎င်းကို cullet၊ ဆိုဒါပြာ၊ ဆိုဒီယမ်နိုက်ထရိတ်၊ scallop carbonate၊ quartz sand စသည်တို့ကဲ့သို့သော ကုန်ကြမ်းတစ်ဒါဇင်ကျော်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် အပူချိန် 1600 ဒီဂရီတွင် အရည်ပျော်ခြင်းနှင့် ပုံသွင်းခြင်းကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ကွန်တိန်နာအမျိုးအစားဖြစ်သည်။မတူညီသောပုံစံများအလိုက် မတူညီသောပုံစံများကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ဖန်ပုလင်းများ၊ ဝိုင်ပုလင်းများ၊ အဖျော်ယမကာပုလင်းများ၊ ချဉ်ပုလင်းများ၊ ပျားရည်ပုလင်းများ၊ စည်သွတ်ဗူးများ၊ ၀.၅ ကီလိုဂရမ်/၂ ပုလင်းများ ရှိပါသည်။5 ကီလိုဂရမ် /4ကီလိုဂရမ်ဝိုင်အိုး… နှင့်အခြားဖန်ပုလင်းများ။ဖန်ပုလင်းသည် အလုံပိတ်ထားပြီး အလင်းပြန်သွင်းနိုင်သောကြောင့် စိုထိုင်းဆအလွန်အမင်း ထိခိုက်လွယ်သော ထုတ်ကုန်များကို အချိန်ကြာကြာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
ထုပ်ပိုးမှုနယ်ပယ်တွင် ဖန်ထုပ်ပိုးခြင်း၏ အားသာချက်များ
1. ဖန်ပစ္စည်းတွင် အောက်ဆီဂျင်နှင့် အခြားဓာတ်ငွေ့များ ပါဝင်မှုကို တိုက်ခိုက်ခြင်းမှ ကောင်းစွာ ဟန့်တားနိုင်သည့် ကောင်းသော အတားအဆီးတစ်ခု ရှိပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ၎င်းသည် လေထုထဲတွင် ပါဝင်သည့် မငြိမ်မသက်သော အစိတ်အပိုင်းများကို လေထုအတွင်း မငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင် တားဆီးပေးနိုင်သည်။
4. ဖန်ပုလင်းသည် ဘေးကင်းပြီး တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု၊ ချေးခံနိုင်ရည်ကောင်းမွန်ပြီး အက်စစ်ချေးခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အက်စစ်ဓာတ်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖျော်ရည်အချိုရည်စသည်ဖြင့်) ထုပ်ပိုးရန်အတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
5. ထို့အပြင် ဖန်ပုလင်းများသည် အလိုအလျောက် ဖြည့်သွင်းသည့် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ ထုတ်လုပ်ရန် သင့်လျော်သောကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် အလိုအလျောက် ဖန်ပုလင်း ဖြည့်နည်းပညာနှင့် စက်ကိရိယာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာကာ ဖန်ပုလင်းများကို သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖျော်ရည် အဖျော်ယမကာများ ထုပ်ပိုးရန်အတွက် ဖန်ပုလင်းများကို အသုံးပြုလာကြသည်။ ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုမှာ အားသာချက်တွေရှိတယ်။၎င်းကို cullet၊ ဆိုဒါပြာ၊ ဆိုဒီယမ်နိုက်ထရိတ်၊ scallop carbonate၊ quartz sand စသည်တို့ကဲ့သို့သော ကုန်ကြမ်းတစ်ဒါဇင်ကျော်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် အပူချိန် 1600 ဒီဂရီတွင် အရည်ပျော်ခြင်းနှင့် ပုံသွင်းခြင်းကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ကွန်တိန်နာအမျိုးအစားဖြစ်သည်။မတူညီသောပုံစံများအလိုက် မတူညီသောပုံစံများကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ဖန်ပုလင်းများ၊ ဝိုင်ပုလင်းများ၊ အဖျော်ယမကာပုလင်းများ၊ ချဉ်ပုလင်းများ၊ ပျားရည်ပုလင်းများ၊ စည်သွတ်ဗူးများ၊ ၀.၅ ကီလိုဂရမ်/၂ ပုလင်းများ ရှိပါသည်။5 ကီလိုဂရမ် /4ကီလိုဂရမ်ဝိုင်အိုး… နှင့်အခြားဖန်ပုလင်းများ။ဖန်ပုလင်းသည် အလုံပိတ်ထားပြီး အလင်းပြန်သွင်းနိုင်သောကြောင့် အလွန်ထိခိုက်လွယ်သော ထုတ်ကုန်များကို အချိန်ကြာကြာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
5. ထို့အပြင် ဖန်ပုလင်းများသည် အလိုအလျောက် ဖြည့်သွင်းသည့် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ ထုတ်လုပ်ရန် သင့်လျော်သောကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် အလိုအလျောက် ဖန်ပုလင်း ဖြည့်နည်းပညာနှင့် စက်ကိရိယာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာကာ ဖန်ပုလင်းများကို သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖျော်ရည် အဖျော်ယမကာများ ထုပ်ပိုးရန်အတွက် ဖန်ပုလင်းများကို အသုံးပြုလာကြသည်။ ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုမှာ အားသာချက်တွေရှိတယ်။ဤဆောင်းပါးကို Xingda Glass မှပေးသည်။
စာတိုက်အချိန်- ဇွန်- ၀၃-၂၀၂၁
ဖျော်ရည်အတွက် ဖန်အိုး, ဖန်ရည်ပုလင်းများ, Glass Bbq Sauce ပုလင်းများ, ဖန်ပုလင်းအချိုရည်, Reed diffuser ပုလင်း, ဘီယာ ဖန်ပုလင်း,